स्वास्थ्य पेज » चस्मालाई बाफबाट कसरी जोगाउने? चस्मालाई बाफबाट कसरी जोगाउने? – स्वास्थ्य पेज
चस्मा लगाउर्नैपर्ने बाध्यता भएकाहरूका लागि मास्क थप बोझिलो बन्न सक्छ। चस्मा र मास्क लगाएको अवस्थामा सास फेर्दा बाफ सिधै चस्मामा गएर ‘कुहिरीमण्डल’ भएजस्तै देखिन्छ। चस्मामा बाफ गएर बस्दा सवारी चालकलाई अझ बढी समस्या हुन सक्छ। यसले दुर्घटनाको जोखिम पनि निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ।